I-WikiLeaks ayisayi kuphinda isebenzise iakhawunti yeCoinbase | Iindaba zeGajethi
Ukubuyela umva ngokutsha kweWikiLeaks. Ukusukela iakhawunti abanayo eCoibase ivaliwe. Isigqibo esimele ingxaki enkulu kwinkxaso mali yewebhusayithi. Kwaye oko kungazisa iingxaki ezimbalwa kwiqonga. Isizathu sokuvimba kunye nokuvala iakhawunti kungenxa yokuba inkampani kufuneka ithobele umgaqo waseMelika.
Ukususela Isebe likaNondyebo eMelika licela ukuba kungabikho nkampani ineshishini lezemali neWikiLeaks. Ukusukela eyokugqibela inikezelwe ekuhluzeni ulwazi oluninzi olubuthathaka, kokubini kurhulumente nakwizindlu zozakuzo. Ke uCoinbase uthobele umgaqo omtsha.
Njengoko bekulindelekile, nje ukuba oku kutshixwa kwenziwe ngokusemthethweni, UJulian Assange ubize imithombo yeendaba zentlalo kubasebenzisi ukuba boycott Coinbase. Isicelo ekubonakala ukuba asinasiphumo sincinci. Kodwa oko kugxininisa ingxaki enkulu yeqonga.
Nangona, Ukuthintela iakhawunti yeWikiLeaks akuthethi ukuba bayayeka ukwamkela okanye ukusebenzisa iBitcoin. Ungaqhubeka nokusebenzisa imali yedijithali yotshintsho kwiqonga ngokungaziwayo. Ingxaki kukuba, iCoinbase iluncedo olukhulu ekwenzeni lula le nkqubo.
Le yenye yeengxaki zeWikiLeaks, ebikhe yavavanya zonke iintlobo zezisombululo kwiminyaka ukuze ikwazi ukuzigcina kunye nokuzixhasa ngokwazo. Nangona ingengabo bonke abasebenza ngokulinganayo. Ukufika kwee-cryptocurrensets ibe lithuba kubo, ekubonakala ngathi liyabanceda ukuza kuthi ga ngoku. Inyaniso, Assange amarhe okuba nenani elikhulu leBitcoin, kakhulu ukuze abe ngusozigidi.
Ke ngoko, i-cryptocurrensets iyeyona nto iphambili kuyo ingeniso kumaxesha akutshanje. Kodwa, ukuba u-Assange utshintsha ezi Bitcoins zibe yimali, uya kummiselo karhulumente, kanye le nto afuna ukuyiphepha. Siza kubona ukuba iWikiLeaks ibhengeza enye indlela yezemali emva kwale blockin yeCoinbase.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Coinbase ibhloka i-akhawunti ye-WikiLeaks